Bey Miyuki Delica Kpụrụkpụrụ Ọdụ bụ nke edobere cylinder klọọkụ nke na-abịa nha anọ na ọtụtụ agba na imecha. Kpụrụkpụrụ osisi Delica nwere paịlị ma ọ bụ ọdịdị cylinder, na ewepụghị ọnụ nwere nnukwu oghere na nha ha. A na-ejikarị ha eme ihe ndị a na-eji ekwe ekwe rụọ ọrụ na kwa nke ọma. Na mgbakwunye, a na-ewere MADUKI iko bekee dị ka "ọkọlọtọ ụwa" maka ogo ha dị elu, njikarịcha, na ụdị otu. Ndị na-achọ ejiji, ndị na-ese ihe na ndị na-ahụ maka ụdị ejiji na-achọgharị ha nke ukwuu.
Yed ụfọdụ chaplet, na-ete ma ọ bụ na-etinye ya n’ọrụ. Colorscha ndị dị n’elu elu ahụ nwere ike ịpụ apụ, tee ma ọ bụ ma ọ bụrụ na etinyere na ihe mgbaze siri ike.
A na-egbu aja dị ọcha ma ọ bụ galvanized mgbe ị na-etinye ụfọdụ akwa ndị nwere acidic, ha nwere ike ire ere ma ọ bụ gbanwee ọchịchịrị n'ihi mgbanwe mmiri ahụ. Iji zere ụdị ikpe a, kpochapụ akwa akwa gị na eri tupu ịkpụzi.
Ebe Si Malite Zhejiang, China
Aha ika JC Crystal
Nọmba Model JC20190116175A
Agba cha cha Nhọrọ agba
Aha ahia Miyuki Delica Beads
Ojiji Ngwa ọla, ọla aka & ọla
.Dị Anụ beads
MOQ 120 grams (10 grams / tube)
Unzụ Ngalaba: Otu ihe
Otu ngwungwu otu: 5X5X5 cm
Otu nnukwu ibu: 0.012 n'arọ
Dị ngwugwu: 10 grams / tube, 25 grams / ikpe, 100 grams / polybag, 250 grams / polybag, 500 grams / polybag
Nke gara aga: N'ogbe k9 teardrop rhinestones kristal kristal, mma niile ụdị nke azụ azụ iko fancy nkume na-ere ngwaahịa 3 ndị na-azụ ahịa.
Osote: Mbupu free pel 6mm 6mm 8mm gburugburu iko pel beads olu na -e imomi i pearomi pearl ọla
Mkpụrụ osisi nke iko
Mkpọ Bebi Miyuki
Mkpụrụ Mkpụrụ 11/07
Mkpụrụ Mkpụrụ na nnukwu
Ogo mara mma ntu larịị azu kristal non h ...
N'ozu oke mma nke mma miyuki mkpụrụ beads metal ...
2mm eke nnukwu nkume gemstone nke bekee maka ọla ...
Mbupu free pel 4mm 6mm 8mmround bekee ...
Akwa k9 teardrop rhinestones kristal ...
Factorylọ ọrụ Jingcan N'ogbe a na-adọkpụkwa okwute, were na ...